द वाल स्ट्रिट जर्नल, Author at साहित्यपोस्ट
द वाल स्ट्रिट जर्नल
द वाल स्ट्रिट जर्नल 11 लेखहरु0comments
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 २४ पुष २०७८ १२:०१ 0
सिनेमा हल र नेटफ्लिक्समा एकसाथ रिलिज भएको पर्यावरणीय सिनेमा 'डन्ट लुक अप'ले नेटफ्लिक्सले कीर्तिमान बनाएको छ । यो फिल्म डिसेम्बरको अन्त्यमा रिलिज भएयता एक सातामा नै १ करोड ५२ लाख घण्टा हेरिएको छ । यति धेरै हेरिएको नेटफ्लिक्सको इतिहासमा…
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 १३ मंसिर २०७८ १०:५१ 0
प्रख्यात प्रकाशन कम्पनी स्कोलास्टिकका मालिक रिचर्ड रोबिन्सनको गत गर्मी याममा निधन हुँदा अकस्मात चर्को होहल्ला भयो । कारण थियो, ८४ वर्षको उमेरमा हृदयघातबाट मृत्यु भएपछि उनको चार अर्ब डलरको कम्पनी अब कसले चलाउला भन्ने चासो । उनको परिवारले…
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 ३० आश्विन २०७८ १४:०१ 0
बेङ्सी नामक एक बेलायती चित्रकारको च्यात्तिएको चित्रका लागि अढाई करोड डलर तिरिएको छ । एक जना एसियाली चित्रकला संकलकले सो चित्र किनेको वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ । बेङ्सीले यसलाई प्राङ्क कला भनेका थिए । कलामाथिको यो ठट्टा उम्दा…
प्रकाशक बलिया कि कर्मचारी ? माइक पेन्सको आत्मकथाले ल्याएको एउटा मोड
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 १८ आश्विन २०७८ १५:३९ 0
प्रख्यात प्रकाशक सिमोन एन्ड सुस्टरले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बेलाबेलामा तालिम दिने गर्छ । जस्तो कि, पिछडा वर्ग वा लैंगिक अल्पसंख्यकका पुस्तकहरू प्रकाशनका लागि आए, तिनको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, तिनको प्रचार र व्यवस्थापन कसरी र कुन समुदायलाई…
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 २ आश्विन २०७८ १८:०१ 0
झाओ वेई चिनियाँ मनोरञ्जन उद्योगमा दुई दशकदेखि लोकप्रिय अभिनेत्रीका रुपमा कार्यरत थिइन् । उनलाई हलिउडको रिजी विदरस्पुनसँग पनि दाँज्न सकिन्छ किनभने अभिनय मात्र होइन, उनले आफूलाई करोडपति व्यापारीका रुपमा पनि स्थापित गरिन् । उनले…
कोभिड २१ औँ शताब्दीको स्पुतनिक बन्ला ?
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 १४ श्रावण २०७८ १२:०१ 0
माइकल मिल्केन सन् १९५७ सम्म आइपुग्दा अमेरिकाको व्यापार, विज्ञान र संस्कृति कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने ‘अंगद गोडा’ बन्न पुगेको सबैले निश्चय गरे । संसारकै ६ प्रतिशत जनसंख्याले ४० प्रतिशत आर्थिक उत्पादन गथ्र्यो त्यो बेला । अमेरिकाका…
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 २१ असार २०७८ १५:०१ 0
जेम्स क्याम्पबेल बुढ्यौलीतिर लम्किरहेका चर्चित लेखकप्रति दया लाग्छ ! घुमिरहेको चर्खाको गणना हुने दिन नजिकिदैछ । केही व्यापारी गिद्दले भने त्यो कहिले मर्ला र व्यापार गरूँला भनेर आकाशमा चक्कर लगाइरहेको छ । हुन त ती सभ्य गिद्द नै हुन्…
स्ट्रिमिङले फिल्म झुरेस्ट हुन थालेको हो ?
द वाल स्ट्रिट जर्नल	 १९ असार २०७८ ००:०१ 0
यतिबेला स्ट्रिमिङ कम्पनीहरुलाई बढीभन्दा बढी फिल्म चाहिएको छ । कलाकार र निर्देशकहरुलाई पनि कमाउनु परेको छ । आएको मौका नछोड्ने दाउका कारण खास गुणवत्ता फिल्म चाहिँ बन्नै छाडेका छन् र यो चिन्ताको विषय हो ।